KỌMPUTA GBANWEE RUO OGOLOGO OGE. IHE Ị GA-EME - NJIKARỊCHA WINDOWS - 2019
Isi Njikarịcha Windows
Eleghị anya onye ọ bụla na-echeta otú kọmputa ha si arụ ọrụ mgbe a kpọpụtara ya na ụlọ ahịa ahụ: ọ gbanwere ngwa ngwa, ọ kwụsịghị, ihe omume ahụ "gbapụrụ". Mgbe ahụ, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, o yiri ka a dochie ya - ihe nile na-arụ ọrụ nwayọ, na-aga n'ihu ruo ogologo oge, na-etinye ọnụ, wdg.
N'isiokwu a, m chọrọ ịtụle nsogbu nke ihe mere kọmputa ji agbanye ogologo oge, ma ihe a ga-eme na ihe a niile. Ka anyi gbalịa ime ngwa ngwa ma bulie PC gi n'enweghi iweghari Windows (obu ezie, mgbe ufodu, n'enweghi ya n'uzo obula).
Weghachite kọmputa na 3 nzọụkwụ!
1) Mmalite nhicha
Ka ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, ị wụnyela ọtụtụ mmemme na ya: egwuregwu, antiviruses, iyi, ngwa maka ịrụ ọrụ na vidio, ọdịyo, foto, wdg. Ụfọdụ n'ime mmemme ndị a na-edeba aha ha onwe ha ma malite na Windows. Enweghị ihe ọ bụla dị njọ na nke ahụ, mana ha na-etinye ego na oge ọ bụla ha na-agbanye kọmputa ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị naghị arụ ọrụ na ha!
Ya mere, ana m akwado ka ị gbanyụọ ihe niile na-enweghị mkpa na nchịkọta ma hapụ naanị ihe kachasị mkpa (ị nwere ike gbanyụọ ihe niile, usoro ahụ ga-ebuba ma rụọ ọrụ n'ọnọdụ nkịtị).
Enweelarịrị isiokwu n'isiokwu a:
1) Esi gbanyụọ mmemme arụmọrụ;
2) Malite na Windows 8.
2) Ihicha "ahihia" - anyị na-ehichapụ faịlụ nwa oge
Ka kọmputa na mmemme na-arụ ọrụ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke faịlụ na-adịru nwa oge na-agbakọta na diski ike, nke gị na Windows adịghị achọ. Ya mere, oge ọ bụla a chọrọ ka ewepụ ha na usoro ahụ.
Site na isiokwu banyere usoro kachasị mma maka ihichapu kọmputa ahụ, ana m akwado ka ị were otu n'ime ihe ndị ahụ ma jiri ya na Windows.
Onwe m, ana m ahọrọ iji ọrụ: WinUtilities Free. Na ya, ị nwere ike ihichapụ diski na ndekọ ahụ, n'ozuzu, ihe niile ga-ebuli arụmọrụ nke Windows.
3) Njikarịcha na nhicha nke ndekọ, nkesa disk
Mgbe nhichapu diski ahụ, ana m akwado ime ka ndekọ ahụ dị ọcha. Ka oge na-aga, o nwere ndenye na-ezighị ezi na ezighi ezi nwere ike imetụta arụmọrụ usoro. Nke a abụrụla isiokwu dị iche iche, m na-enye njikọ: otu esi ehicha ma mebie ndekọ ahụ.
Ndien ke kpukpru n̄kpọ emi ẹdude ke enyọn̄ - utịt akpatre: ndinam mfri diski.
Mgbe nke ahụ gasịrị, kọmputa gị agaghị agbanye ruo ogologo oge, ọsọ nke ọrụ ga-abawanye ma ọtụtụ n'ime ọrụ ndị dị na ya nwere ike idozi ya ngwa ngwa!
https://termotools.com ig.termotools.com © Njikarịcha Windows 2019